सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि कोभिड–१९ अस्पतालमा शय्याको अभाव – Sulsule
सुलसुले २०७७ साउन २३ गते १५:४६ मा प्रकाशित
यस्तै पाटन अस्पतालमा कोभिड–१९ का लागि छुट्ट्याइएका ६० शय्या भरिएर थप १२ शय्या पनि सङ्क्रमितलाई राखेर उपचार गरिरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद शर्माले राससलाई जानकारी दिए । पाटनमा भर्ना गरिएका सङ्क्रमित प्रायः लक्षण भएका छन् । तीमध्ये चार जनालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि शय्या अभाव हुन थालेको छ । कूल ५० शय्यामा एउटा मात्र खाली रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले जानकारी दिए । अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) २० वटामध्ये १५ वटामा सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ । यस्तै नौ भेन्टिलेटरमध्ये दुई भेन्टिलेटरमा गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. राजभण्डारीले सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि अब लक्षण भएका सङ्क्रमितलाई मात्र भर्ना गरेर उपचार गरिने बताए । “उपत्यकामा सङ्क्रमित दैनिक बढिरहेका छन् । ती सबै सङ्क्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्न सम्भव छैन”, उनले भने, “अब लक्षण देखिएका बिरामीलाई मात्र भर्ना गरेर उपचार गर्ने हो ।” उनले लक्षण नभएका सङ्क्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरिने बताए । केही दिनयता रुघाखोकी, ज्वरो, स्वासप्रस्वासमा समस्या, थकाइ लाग्ने, स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउनेजस्ता लक्षण भएका सङ्क्रमित देखिन थालेका छन् ।
अस्पतालमा भर्ना भएका ३३ प्रतिशत सङ्क्रमितमा लक्षण देखिएका छन् । यसैगरी वीर अस्पतालमा दुई जनाको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ । कोभिड–१९ अस्पताल नतोकिए पनि चार वटा आइसोलेसन शय्याको व्यवस्था गरेको वीरका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले जानकारी दिए ।
उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ का सङ्क्रमितलाई पनि उपचार गर्न परिपत्र गरेपछि आवश्यक व्यवस्था गर्न थालेको बताए । उनका अनुसार वीरमा अहिले १५ सङ्क्रमितलाई उपचार गर्ने व्यवस्था रहेको छ । “पहिले हामीलाई कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार गर्न भनिएको थिएन । त्यसैले हामीले सङ्क्रमितका उपचारको व्यवस्था गर्नका लागि तयारी गरेका थिएनौँ”, उनले भने, “तर अहिले मन्त्रालयले नै निर्देशन दिएपछि हामी उपचारको व्यवस्था गर्न जुटेका छौं ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा अहिले नौ जना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ । तीमध्ये तीन जना आइसियु र छ जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. सन्तकुमार दासले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अस्पतालमा १५ जनालाई मात्र उपचार गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको छ । “हाम्रो अस्पताल कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार गर्न भनेर तोकिएको अस्पताल होइन”, उनले भने, “त्यसैले हामीले धेरै सङ्क्रमित राख्ने सक्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयले कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार गर्न निर्देशन दिए भने हामी तयारी गर्दछौँ ।”